थ्रो ब्याक टुर डे लुम्बिनी - News Book Online
स्वयम्भू फेदैमा छ चियापसल । मर्निङ वाक सकेर चिया पिउनेहरुको घुइँचो छ यहाँ । अनि व्यस्त थिइन् पसल्नी दिदी । साइकलमै बुद्धजयन्ती मनाउन काठमाडौदेखि लुम्बिनी साइकलमा हुइकिने कुरा सुनाउँदा जिब्रो टोकिन दिदीले । ‘साइकलमै लुम्बिनी?,’ उत्सुकता पोख्दै उनले थपिन्, ‘गर्मीले मःम जस्तै बफाउने भो क्यारे भाइहरुलाई ।’ प्रत्युत्तरमा मुसुक्क हाँस्दै म लागे स्वयम्भू फेदको मैदानमा ।
खाली भुइँखेल चौर छिनभरमै भरिए साइकलेहरुले । टाउकोमा हेलमेट, हातमा ग्लोब्स अनि उस्तै सुहाउँदो साइकले पोसाक । पछाडि भिरेका थिए चार दिनका लागि सरसमान भरिएको झोला । पाउदानी चलाएरै लुम्बिनी पुग्ने हुटहुटी, जुन प्रष्ट भेटिन्थ्यो हसिला चेहरामा । चार दिन अर्थात स्वयम्भू देखि लुम्बिनी । पूराका पूरा ३ सय ७० किलोमिटर । त्यो पनि साइकलमै । सानोतिनो मिसन थिएन नि !
सबै नौला नौला अनुहारका थिए । फरक ठाउँ अनि फरक पेशाका थिए सबै । तर नजिक्याएको थियो सबैलाई साइकलको नाताले । आयोजकले सबैलाई टि–सर्ट बाडे । लुम्बिनीको फोटोसहितको टि–सर्टमा सबैलाई एकै देखिए । खाजासँगै यात्राको ब्रिफिङ सम्पन्न भयो । सयभन्दा बढी साइकलेहरु थिए । अनि थपिदै जानेछन्, हेटौडा, चितवन अनि बुटवलमा । कमिलाको तातीझैं लस्करै लामबद्द साइकलेहरु लुम्बिनी पुग्दा कस्तो देखिएला ? मनमनै उत्सुकताको मुल फुट्यो ।
टुर डे लुम्बिनी । नेपालकै साइकलिङ क्षेत्रमा ब्रान्ड नाम हो यो कार्यक्रम । शान्ति र्‍याली । अर्थात पिस र्‍याली टु लुम्बिनी । विश्व साइकलयात्री पुस्कर शाहले कुनै दिन सपना सुनाएका थिए, ‘हरेक वर्ष बुद्धजयन्ती मनाउन साइकल मै लुम्बिनी जाऔं न ।’ नभन्दै २०६९ मा पहिलो पटक विश्व साइकलयात्री प्रतिष्ठानले टुर डे लुम्बिनी आयोजना गरेको थियो । पछि टुर डे लुम्बिनी नामक संस्था स्थापना गरेरै अन्य यात्राहरु अघि सारिए । अनि यस कार्यक्रमले हाई गियरमा उक्लेर गति लियो । समयसँगै नेपालकै ब्रान्ड बन्यो यो ।
पहिलो दिन । भुइँखेलको त्यो मैदान । त्यहीँ बौद्ध गुरुहरुले अष्ट मंगल उच्चारण गरे । निधारमा टीका अनि कानमा फूल सिउरिइदिए बिदाई गर्ने टोलीले । थानकोटसम्म रमरम पार्ने सगुन (अ‍ैला) मुखमा राखेसँगै लस्करै लागे साइकलेहरु । थानकोट हुँदै पुग्नुपर्ने चन्द्रगिरी हिल्स । कति भाग्यमानी साइकल । केवलकारमा सरर चन्द्रगिरी हिल्स । त्यसपछि ओरालो बाटो पछ्याउँदै चित्लाङ पुगे साइकलेहरु । यसैमा जोडिन्छ अशोक चैत्यको इतिहास र बौद्ध दर्शन । चित्लाङको अशोककालीन प्राचीय चैत्यले उनको योगदानलाई जीवन्त बनाइदिन्छ । त्यसैले पनि यो रुट अझ विशेष छ, उनीप्रति सद्धभाव अनि सम्मान प्रकट गर्न ।
चित्लाङको लोभलाग्दो फाँट । तरेली परेका खेतका गराहरु । हेर्दै लोभलाग्दा । हेरिरहुँ खालका । अनि गराहरु ढकमक्क ढाकिएका छन् सिजन अनुसारका तरकारीले । काठमाडौंबासीको भान्छा भान्छामा पाक्ने तरकारी यहीँ न हो । बिशंखेल अनि बज्रबाराही उस्तै प्रिय ठाउँहरु । कति क्यामरा त कति पलहरु हृदयको अन्तरकुनामा कैद गर्दै उक्लिए साइकलेहरु सिमभञ्ज्याङ । कहिले उकाली, त कहिले ओराली । जीवन पनि त यस्तै हो कि उकाली ओराली । उकालो चढ्दाको थकान दामनको चिसो सिरेटोले बिर्साइदिन्छ । अनि क्षणभरमै ज्यानमा नवीन उर्जा रिचार्ज भइजान्छ । ‘ट्याक्सी गुडाउँदै, बाइरोडको बाटोमा धुँलो उडाउँदै,’ सुप्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार गणेश रसिकको यो गीत अनायसै मनमनै गुन्जिए । त्रिभुवन राजपथको ओरालो बाटो । उहिले त राजधानी र तराई जोड्ने विकल्प नै यही न थियो । अहिले भने बिपी राजमार्ग र मुग्लिन – नारायणघाट राजमार्गले गर्दा सुनसान बनेको छ यो बाटो । बत्तिदै मोटर गाडीलाई उछिन्दै ओरालो लागेका थिए साइकलेहरु । अनि अबेर साँझ पुगेका थिए साइकलेहरु हेटौंडा ।
हेटौंडा बसाइमा यादहरु मात्र थपिएनन्, सँगै थपिए हेटौंडाबाटै थप साइकलेहरु, लुम्बिनीका लागि । कहाँ दामनको चिसो सिरेटो, कहाँ हेटौंडाको हपहप गर्मी । सुरुमा त ज्यानले मेसोमेलो नै पाइराथेन् । चितवन पुग्ने हुटहुटी होला, खै गर्मीको अनुभूति भने मस्तिष्कलाई फिटिक्कै थिएन । थकान, गर्मी अनि प्यास बिसाईदिने ठाउँठाउँमा स्वागत अनि बिदाई हुन्थे । कति दिल खोलेर स्वागत गरेका ! त्यो हार्दिकताका लागि सलाम । नेपालीपन झल्किएको । आफ्नोपनको प्रेमिल स्वाद ।
टोली लिड गर्ने अगाडि नाइके हुन्थे । कोही साइकलेहरु सिकारु थिए त कोही पोख्त । सबैलाई सँगै लानु जो थियो ।
दिनभर अत्याउने घाम पारि क्षितिज पुग्याथ्यो । गौथुली साँझ । थकान बिर्साउने थारु परम्पराको स्वागत, उस्तै विशेष । सबै साइकलेहरु बराबर बाँडेर घरबासहरु तिर लागे । बेलुकाको थारु परिवार उद्युमै स्वादिलो । जिब्रोमै गडेको थियो त्यो रैथाने थारु परिकारको स्वाद । यता मनमा गडेको थियो, उनीहरुले पस्केका थारु सांस्कृतिक नृत्युहरु ।
कोही रफ्तारमा अगाडि कुदेनन् र नसक्नेहरु छुटेनन् पछि पछि । पछि परेकाहरुलाई हौसाउँदा सँगै लस्करै कुदेका थिए साइकलेहरु । एकदमै गाहै्र पर्नेहरुलाई रेस्क्यु गाडी र औषधी उपचारसहितको एम्बुलेन्स पछिपछि हुन्थ्यो । यहीँ भएर पनि होला, कोहीले कमजोर ठानेनन् । हिम्मत हारेका थिएनन् कसैले । आत्मबल बलियो पारेर पाउदानी चलाइरहे ।
मध्यान्हको टन्टलापुर गर्मी । चितवनको न्यानो स्वागत र आतिथ्यताले शितलता मिलेको थियो मनमा । गर्मी छलेर साँझपख नवलपुरमा अवस्थित पिप्रहर होमस्टेतिर लागे सबै । दिनभर अत्याउने घाम पारि क्षितिज पुग्याथ्यो । गौथुली साँझ । थकान बिर्साउने थारु परम्पराको स्वागत, उस्तै विशेष । सबै साइकलेहरु बराबर बाँडेर घरबासहरु तिर लागे । बेलुकाको थारु परिवार उद्युमै स्वादिलो । जिब्रोमै गडेको थियो त्यो रैथाने थारु परिकारको स्वाद । यता मनमा गडेको थियो, उनीहरुले पस्केका थारु सांस्कृतिक नृत्युहरु ।
राति खाना पछि सबै सामुदायिक हलमा भेला भए । एक अर्कासँग चिनापरिचय भयो । सबै जना हलमा अटाए अनि सँगै अटाए फराकिलो हृदयमा सबै जना । रात छिपिँदै गएसँगै सांस्कृतिक माहोल जम्दै गयो । मौलिक भेषभूषामा सझिएका थिए उनीहरु । क्या ! अर्गानिक स्वाद पस्केका । गीतका शब्द नबुझेपनि भाव प्रष्ट बुझिएको थियो । मौलिक संस्कृति र राष्ट्रिय एकताको बुलन्द आवाज बोकेका थिए गीत र नृत्युले । नचाहँदा नचाहँदै सबै बिदा लिएर बिस्तारतिर लागे, किनकि बिहानै लाग्नु थियो बटौली ।
यात्राको तेस्रो दिन । पुग्नु पर्ने गन्तव्य बटौली । बिहानै घरबासमा नास्ता लिए सबैले । स्वागत जस्तै भव्य थियो बिदाई पनि । समय अभावले नजिकैको सामुदायिक वन, निकुञ्ज क्षेत्र घुम्ने र धीतमरुन्जेल रमाउने समय कहाँ हुँदो हो । हिजो लस्करै आएझैं लस्करै निस्किए राजमार्गतिर । अनि लागे दाउन्नेतिर । ५५ किलोमिटर मज्जाले कुदाए सबैले ।
बुद्धजयन्तीको त्यो दिन । यात्राको अन्तिम अनि विशेष दिन । मध्यान्ह सम्म पुग्नुपर्ने थियो लुम्बिनी । बटौलीबाट साइकले मनहरु जोडिए । ठाउँठाउमा फेरि स्वागत अनि सत्कार । खै शब्दै थिएनन् धन्यवाद टक्राउन। पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै साल्घारी, बुटवल पुगे टोली । बाटैमा लिन आए, नाजगान सहित शुभकामना आमा समूहको टोली । उधुमै नाचियो । फलफूल अनि खाजा खाए सबैले । त्यो भन्दा स्वादिलो थियो फूलमाला, खाँदा सहितको स्वागत । मगर बाजागाजा सहितको नाजगाजमा सबै छमछमी नाचें । साइकलेहरु नि के कम, कम्मर मर्काइ-मर्काइ नाचे । जहाँ पनि उही न हो, बिदाईका हात हल्याउदै टोली लाग्यो लुम्बिनी ।
नेपालभरबाट प्रतिनिधि गरेका थिए दुई सय हाराहारीका साइकलेहरु । तीन दिनसम्म सँगै यात्रा गर्दा आफ्नै भइसकेका थिए । बटौलीको बसाइ झन् यादगर रह्यो ।
बुद्धजयन्तीको त्यो विशेष दिन । विश्वभरका शान्तिका अनुयायीहरु जम्मा भएका थिए यहाँ । कसैको साइकलमा नेपालको झण्डा त कसैकोमा शान्तिको प्रतीक झल्काउने झण्डाहरु । झण्डा फरफराउँदै विश्व शान्तिको कामना गर्दै आइपुगे गन्तव्यमा । लुम्बिनी व्यवस्थापन समितिले एकमुष्ट टोलीलाई लुम्बिनीका स्वागत गर्‍यो। मायादेवी मन्दिर परिसरमा पुगेर दर्शन गरे, प्रवचन अनि ध्यानमा सरिक भए साइकलेहरु । अनि निस्किए, साइकलमा लुम्बिनी फन्को मार्न । कोही विश्व शान्ति स्तूपतिर लागे, कोही विभिन्न देशहरुले बनाइदिएका गुम्बाहरु नियाल्न । जति हेरे पनि कहाँ धीत मथ्र्यो र ? बेलुका मायादेवी मन्दिरमा बत्ती बाले । सबैले समाज, देश र सिंगो विश्वकै शान्तिको कामना गरेर बिदा लिए लुम्बिनीबाट । अनि रात्रिबसमा फर्किए काठमाडौं ।
हरेक वर्ष गरिदै आएको यस कार्यक्रम २०७६ सालसम्म आइपुग्दा सातौं पटक भव्यताका साथ सम्पन्न गरियो । देशभरका साइकलेहरुको जमभट बनेको छ यो कार्यक्रम । पोहोर साल पनि बुद्धजयन्ती मनाउन लुम्बिनी पुग्ने सपना कोरोना कहरले ब्रेक लाग्यो । अनि यसपालि पनि । तर मन भने लुम्बिनीतिरै डुलिरहेको छ । विगतका ती स्मरणीय पलहरु मनमा खेलिरहेका छन् । सम्झिरहेका छन् ती तमाम साइकलेहरु र उनीहरुसँग गाँसिएका मिठा किस्साहरु ।
चार दिनको यो यात्रा आफैंमा जीवनको मिठो सम्झना बनि कैद बन्छ, हृदयको अन्तरकुनामा । साइकलको पाउदानीका टुक्राटुक्रा जोडेर साइकल कुदाएझैं यस कार्यक्रमले नेपालभर छरिएर रहेका साइकले मनहरुलाई जोड्ने काम गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरु थाइलान्ड, बेलायत, अमेरिका लगायतका साइकलेहरु पनि जोडेका थिए । यो विश्व भातृत्व जोड्ने पुलको काम गरेको छ । अझ नेपालमा साइकल पर्यटनको क्षेत्रमा यो माइलस्टोन बन्न सक्छ । आगामी वर्षहरुमा अझ बृहत र भव्य बन्नेनै छ यस कार्यक्रम ।
तमाम ती साइकलेहरु प्रति माया अनि सम्मान । यसपालिको बुद्धजयन्ती मनबाटै मनाऔं । मन शान्ति, तब न विश्व शान्ति । छिट्टै कोरोना महामारीबाट विश्वले शान्ति पाओस् । २५६५ बुद्धजयन्तीको सबैलाई शुभकामना ।
ह्याप्पी बुद्धजयन्ती !!
(सबै तस्बिर टुर डे लुम्बिनी)